Cnaps: maro ireo hiara-kiasa amin’i Madagasikara | NewsMada
Cnaps: maro ireo hiara-kiasa amin’i Madagasikara
Par Taratra sur 16/12/2019
Fifanarahana maro no natao sonia, ny herinandro lasa teo, tetsy amin’ny foiben’ny Tahirim-pirenena misahana ny fiahiana sosialy (CNaPS). taorian’ny fivoriambe Filankevitry ny minisitra mikasika ny fiahiana sosialy(Cipres) ho an’ny firenena miisa 17, natao teto Antananarivo, ny 10-12 desambra lasa teo.
Natao ny 13 desambra ny sonia teo amin’ny tale jeneraly (DG) ny CNaPS, Rakotondraibe Mamy, sy ny DG-n’ny Tahiry kaomoriana, i Ahamadi Sadi. Nifanatona hiara-kiasa ny firenena roa tonta, satria maro ny Kaomorianina miasa eto amintsika, ary torak’izany koa nyMalagasy miasa any amin’izy ireo. Koa samy hisitraka ny fanampiana sosialy avokoa izy ireo.
Faharoa, ny fifanarahana teo amin’ny tale jeneralin’ny minisiteran’ny Asam-panjakana, Razafimanantsoa Jerson, sy i Severin Anguille, tale jeneralin’ny Tahiry any Gabon. Mampiavaka ity firenena ity ny fiahiana ara-pahasalamana ho an’ny mpiasam-panjakana, ny mpiasan’ny tsy miankina ary ny olona marefo. 20% ny fandraisan’anjaran’ny marary ary an’ny fanjakana ny 80%. Afaka manaraka fitsaboana any ivelany (Maraoka, Frantsa, Tonizia, Tiorkia, …) ny Gaboney raha misy fandidiana sarotra. Hiantohan’ny fanjakana 100% kosa ny mararin’ny diabetika, misy tosidra.
Fifanarahana fahatelo, teo amin’ny DG-n’ny CNaPS, sy ny DG-n’ny Tahiry (CNPS) any Cameroun, i Glivier Mekulu Mvondo Akame. Mampiavaka ity firenena ity, raha ny maraina no mangataka fisotroan-dronono ny mpikambana, ny harivan’iny ihany dia mivaly. Ny eto amintsika anefa mbola telo volana vao mahazo fisotroan-dronono. Nilaza ny DG Rakotondraibe Mamy, fa hisy mpiasan’ny CNaPS halefa any Cameroun hijery ifotony izany fomba fiasa izany.
Haingam-piasa koa izy ireo amin’ny fanampiana hafa satria efa ampiasaina ny teknolojian’ny informatika (logiciel).
Natao ny asabotsy teo kosa, ny fifanarahana teo amin’ny DG-n’ny CNaPS sy ny DG-n’ny Tahiry (Carfo) any Burkina Fasso, Rtoa Laure Zongo. Haingam-piasa toy ny any Cameroun koa izy ireo, satria mivaly ny hariva ihany ny fisotroan-dronono. Manana trano fonenana avokoa ny mpikambana avy amin’ny tetikasa Tahiry. Ho any an-toerana avy hatrany ny iraky ny CNaPS, ny janoary ho avy izao, ka hampiharina eto amintsika izany manomboka ny telo volana faharoan’ny taona 2020.